Raha tianao hamokatra ny vokatra tadiavinao ianao, mazàna, mila manome anay sary 3D na sary 2D an'ny vokatrao ianao. Fa raha tsy manana ny sarin'izy ireo ianao dia mila mandefa ny santionany aminay fotsiny ianao na mizara ny eritreritrao aminay, azonay atao ny mametraka ny sary mifanaraka amin'ny santionanao na eritreritrao.
Famaritana mandeha ho azy
① Famaritana mandeha ho azy (raha azonao omena anay ny santionany): Ouzhan dia manana fitaovana fandrefesana mandeha ho azy avy any Japon, izay afaka refesina tsara ny haben'ny vokatra, ary avy eo mamokatra sary 3D.
② Modely 3D: Ny injenieran'i Ouzhan dia afaka manangana maodelin'ny vokatra 3D miorina amin'ny hevitry ny mpanjifa ihany koa.
③ Hitan'ny artifisialy: Ireo sary famolavolana savaranonando dia mila dinihina amin'ny tanana, hamafisina ary soniavin'ny injeniera telo farafaharatsiny.
Making Fanaovana santionany: Hanao santionany araka ny sary voamarina izahay.
Confirmation Fanamafisana ohatra: Handefa ny santionany amin'ny mpanjifa izahay hanamafisana, avy eo ny mpanjifa dia mila manasonia ny fanamafisana ny santionany.
Production Famokarana faobe: Aorian'ny fahazoana ny santionany fanamafisana nosoniavin'ny mpanjifa sy ny fandoavam-bola mialoha, dia hanao famokarana betsaka izahay.
Nandalo ny fitsapana ISO 9001: 2015 izahay, ary manana rafitra fitantanana kalitao tsara. Ka tsy mila miahiahy momba ny kalitaon'ny vokatray ianao fa hiezaka hanome anao ny vokatra sy serivisy kalitao tsara indrindra.
Izy io dia nandalo tamin'ny alàlan'ny fanamarinana mari-pahaizana nasionaly ary noraisina tsara tao amin'ny orinasantsika lehibe. Ny ekipanay injeniera manam-pahaizana dia matetika vonona hanompo anao amin'ny fizahana sy hevitra. Afaka nanatitra anao koa izahay tamin'ny santionany tsy andoavam-bola hihaonana amin'ny antsipirihanao. Ny ezaka mety dia hamboarina hanomezana anao ny serivisy sy vahaolana mahasoa indrindra. Raha tena liana amin'ny orinasanay sy ny vahaolana ianao dia mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka aminay na miantso anay avy hatrany. Ho afaka hahafantatra ny vahaolana sy ny orinasanay. Ary ho azonao atao ny manatona ny ozininay hijerena azy. Handray vahiny tsy tapaka avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao amin'ny orinasa izahay.